Gudaha Somaliland Oo Laga Dhex Ururinayo Rag La Doonayo Inay Matalaan Somaliland Una Tartamaya Baarlamaanka Somaliya Iyo Mooganaanta Xukuumadda |
Gudaha Somaliland Oo Laga Dhex Ururinayo Rag La Doonayo Inay Matalaan Somaliland Una Tartamaya Baarlamaanka Somaliya Iyo Mooganaanta Xukuumadda
Warar xog ogaal ah oo ay helayso shabakada wararka Gabileynews ayaa sheegaya in gudaha Somaliland laga dhex ururinayo rag la doonayo inay matalaan saamiga dawlada Somaliland ku leedahay somaliya isla markaana u tartamaya musharaxnimada xildhibaanada baarlamaanka dawlada somaliya.
Waxaana sida naloo sheegay magaalada laascaanod iyo ceerigaabo ku sugan masuuliyiin ka tirsan dawlada Somaliya dhalasho ahaana kasoo jeeda Somaliland kuwaasi oo ururinaya sida naloo sheegay ragan la doonayo inay u tartamaan doorashada baarlamaanka somaliya ayna matalaan saamiga Somaliland ku leedahay dawlada somaliya.
Waxaana xildhibaanada laga doonayo Somaliland lana damacsan yahay inay u tartamaan baarlamaanka somaliya tiradooda naloogu sheegay 45 xildhibaan kuwaasi oo la doonayo inay ka kala socdaan matalaana dhamaan beelaha dega Somaliland.
Waxaana ay xogahani Ramaasnews u sheegeen in ragan la doonayo in laga dhoofiyo madaarka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool.
Xukuumadda Somaliland ayaan iyadu ilaa hadda ka hadal una muuqda kuwa aan ka war hayn arinkani dhaawaca ku ah qaranimada Somaliland isla markaana dhaawacaya jiritaanka iyo madax-banaanida jamhuuriyada Somaliland.